घुम्न जाने होइन त उरै पदमार्ग ?- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
घुम्न जाने होइन त उरै पदमार्ग ?
श्रावण २१, २०७५ वसन्तप्रताप सिंह
बझाङ — हिमाली जिल्ला बझाङमा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका थुप्रै स्थान मध्येको एक हो उरै पदमार्ग ।
सदरमुकाम चैनपुरबाट करिब १० दिनको यात्रामा ओहोर–दोहोर गर्न सकिने यस पदमार्ग छिचोल्न त्यति सजिलो त छैन । तर, आाखैअगाडि देखिने साइपाल र राक्सियो हिमाल, सेती नदी, विभिन्न रंगका पहाडहरू, भेडाका लावालस्कर, चिनियाा ह्याट (टोपी) लगाएका भेडी ग्वालाहरू, बाटोमा पर्ने विभिन्न तालतलैया तथा सुन्दर हिमाली झरनाहरूले यात्रा अविस्मरणीय बनाइदिन्छन् ।
चीनको तिब्बतमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर पुग्ने बाटो पनि यही नै हो । बाटोमा भेटिने मन्दिरहरूमा मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूले चढाएका स–साना घण्टाहरू बजाउादा निस्कने मधुर आवाजले वातावरण नै उल्लासमय बनिदिन्छ ।
यो पदमार्ग परम्परागत रुपमा भोटसाग व्यापार गर्ने मार्ग पनि हो । पहिले तिब्बतबाट नुन, ऊन र सुन ल्याउन यही पदमार्गको प्रयोग गर्थे ।
अस्थायी तर व्यवस्थित होटलहरूको मीठो खाना र सत्कार, हिमाली जलवायुसागको सान्निध्यताले यात्रालाई थप उर्जा पैदा गर्छ । चारवटै सिजनमा घुम्न सकिने उरैमा बर्सेनि थुपै्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु पुग्ने गर्दछन् ।
पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएर पनि उरैको जति प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धन हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । स्थानीयबासीहरुले पनि उत्तिकै जागरुक हुनु जरुरी देखिन्छ ।
प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ २१:१९
यसरी निकालियो गोदावरी खोलामा बगेको कार
श्रावण २१, २०७५ शब्द/तस्बिर : सुरविन्द्रकुमार पुन
काठमाडौँ — ललितपुरको महालक्ष्मीस्थान नगरपालिकाको सिद्धिपुर भएर बग्ने गोदावरी खोलामा सोमबार बिहानै कारबग्यो । रातभरको वर्षात्‌ले खोला बढेका बखत लुभुबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बा१४च ४७२९ को कार बिहान करिब ६ बजेतिर बगेको हो । कार चालक (धनी) भने सकुशल रहन सफल रहेको स्थानीयले बताए ।
दिउँसो करिब साढे ३ बजे घटनास्थल पुग्दासम्म कार गोदावरी खोलामै रहेको थियो । सिद्धिपुर बजार बीच बग्ने खोलाको वारि र पारि सयौंका स्थानीय रमिते बनेका थिए । स्थानीय युवा, यातायात व्यवसायी, प्रहरी दिनभर कार निकाल्नका लागि तल्लिन थिए । एक्जाभेटर, क्रेन समेत ल्याइएको थियो । बीचबीचमा वर्षा हुँदा खोला झनै बौरिएपछि कार निकाल्ने काम अझ प्रभावित हुन्थ्यो ।
लुभु–लगनखेल चल्ने सवारीसाधनले साविकको दुरी छोट्याएका थिए । लुभुबाट चल्ने यातायातका साधन खोला किनारबाटै फर्किने र यता लगनखेलबाट लुभुका लागि छुटेका सवारी सोही खोला नजिकबाटै फर्किए ।
कार निकाल्ने हरेक जुक्ति निकालिए । अन्तत: पौडिन सक्ने दुई खाइलाग्दा युवालाई छनौट गरियो । कार भएको ठाउँसम्म डोरी लगेर बाँध्ने काम सबैभन्दा जोखिम थियो ।
नाइलनका लठ्ठाले कार निकाल्ने प्रयास नगरिएको होइन । नाइलनको डोरी चुँडिएपछि थप समस्या बनेको थियो । अन्तमा फलामको साङ्लोले कारलाई बाँधेर खोला किनारसम्म ल्याइयो । त्यो अघिसम्म कारको नम्बर प्लेट ठम्याउन सकिएको थिएन ।
खोलाको किनारमा ल्याइएपश्चात् त्यसलाई माथि जमिनमा लिनु कुनै समस्या थिएन । सहज ढंगले कार निकालियो । ‘लाहुरेको छोरोको कार’ भन्दै स्थानीय सर्वसाधारणले बताइरहेका थिए ।
बनोट हेर्दा कार पुरानो थिएन । दिउँसोभर डुबानमा परेका कारण बाढी मिसिएको खोलासँगै बगेका ढुँगाहरु ठोक्किँदा भिरबाट खसेर दुर्घटनाग्रस्त बनेको थोत्रो गाडीजस्तै देखिन्थ्यो ।
कार जमिनमाथि निकाल्दासम्म पौने ४ बजिसकेको थियो । सुगमस्थल मात्र नभई बजारको बीचमै रहेर पनि एउटा सानो कार खोलामा बग्दा निकाल्न पौने १२ घण्टा समय कुर्नुपर्ने तितो यथार्थ सहरिया जीवनको प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण रहेको महसुस गरेँ । मानौं, सिद्धिपुर बजारमा जात्रा लागेजस्तै भयो २१ गतेको सोमबार रमितेको भिड देख्दा !
प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ २०:४८